Metal Ukunyathela - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Service Umqondiso wokunyathela
Siza kusebenzisa izixhobo zethu phambili kunye neqela abanamava ukuba wenze imveliso Ucinga, kwaye siyakholwa ukuba sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho zombini ngokwemiqathango ixabiso nomgangatho.
Sheet wentsimbi labunjwa kwiindawo ezahlukeneyo yemigca-efana kunye oonokrwece, isikhongozeli-ezifana workpieces kwi press ngu sokubumba, okanye iziqwenga ityhubhu zenziwa zibe workpieces ezahlukeneyo tubular. Olu hlobo nkqubo kusekwe kwi imeko abandayo kuthiwa sokunyathela abandayo, nezaziwa ukutshayela.
Umqondiso wokunyathela ukuprosesa ubugcisa imveliso iinxalenye imveliso ukumila ethile, ubungakanani kunye nokusebenza esebenzisa amandla kwezixhobo sokunyathela aqhelekileyo okanye ezizodwa, apho deforms ngqo kwaye deforms iphepha ku ukungunda. Sheets, jeli kunye nezixhobo zezona zinto ezintathu ukutshayela.
Iintlobo Inkqubo engundoqo : Ukuhlukunyezwa, ayeguqa, kuchetywa, ukuzoba, ewayo, kukujikeleza, ukulungiswa.
Ezezicelo : Aviation, emkhosini, oomatshini, oomatshini kwezolimo, elektroniki, ulwazi, iziporo, iposi kwezoqhakamshelwano, ukuthuthwa, amachiza, izixhobo zonyango, izixhobo zombane zasekhaya kunye noshishino ukukhanya.
Sisebenzisa jeli ngqo, elithe ngqo le workpiece ingafikelela kwinqanaba micron, kwaye ngendlela nokuphindaphinda liphezulu, iinkcukacha ezifanayo, kwaye ke imingxuma kunye nabaqashi ibe nokukwazi phandle.
(1) Inkqubo yethu bexhentsa na kakhulu kakuhle, kulula ukuba ukusebenza, kwaye kulula ukuba imishini kwaye imishini. Inani izibetho kumatshini eqhelekileyo ukuya amashumi eziliqela izihlandlo ngomzuzu, kwaye uxinzelelo ngesantya esiphezulu kunokuba amakhulu okanye amawaka amaxesha ngomzuzu, kwaye Punch zakufumaneka cinezela stroke nganye.
(2) Ekubeni zibhubha kuqinisekisa ubungakanani nokubumba nokuchaneka inxalenye ifakwe ngexesha ukutshayela, kwaye ngokubanzi na umonakalo umgangatho phezu inxalenye bexhentsa, kwaye nobomi siyafa ngokubanzi elide, umgangatho sokunyathela uzinzile, i interchangeability ulungile, kwaye "enye". Iimpawu.
(3) Sinako cinezela kunye nenkqubo iindawo ngokobukhulu nezintsonkothileyo iimilo ezinkulu, ezifana izitopwotshi encinanana iwotshi, kangangoko imoto imiqadi longitudinal, izahlulo igqubuthelayo, njl, kunye nefuthe deformation ukuqaqadeka abandayo ukutshayela izinto, Ukubetha amandla And ukuqina liphezulu.
(4) Ukunyathela jikelele akukho imvuthuluka chip, nentabalala yezinto eziphathekayo ngaphantsi, yaye akukho mfuneko yokuba ezinye izixhobo zokufudumeza. Ngoko ke, oko kuyinto material-ugcino kunye indlela ezonga umbane processing, kwaye iindleko ukutshayela amalungu esezantsi.
aluminium ukulahlwa, aluminiyam kufa uphose , zinc izitho ukulahlwa kufa, iindawo ezikhupha , izahlulo eyahlulayo kufa , izahlulo aluminiyam zifa bephosa ;